Golaha Shacabka oo isweydiiyey sababta ay Muqdisho u noqon la’dahay amaan – Kalfadhi
Golaha Shacabka oo isweydiiyey sababta ay Muqdisho u noqon la’dahay amaan
Golaha Shacabka ayaa maanta si adag uga dooday nabadgelyada iyo amaanka dalka. Waxay aad ugu nuuxnuuxsadeen xaaladda amni ee Muqdisho. Siyaabo kala duwan ayey xildhibaannadu u dhigeen, una cabireen arrinkaas. Qaar ayaa ku eedeeyey xukuumadda ineysan raacin dhabihii xaqiijinta amaanka, kuwana waxay ku dhaleeceeyeen in ay iyadu amaanka helis gelisay, halka ay qaar kalena ku difaaceen dowladda siyaasaddeeda amniga.
Xildhibaan Axmed Xaaji Taw ayaa golaha ka dhex sheegay in ay dhibaatadu ka socoto ciidan NISA ka tirsanaa, oo uu sheegay in lagu daray booliska, kuwaas oo uu tilmaamay in amni darrada ay qeyb ka yihiin, sida uu hadalka u dhigay. “Waxaa jira ciidan badan oo ka tirsanaa kuwii NISA ee la kala qaybiyay, oo aan meel lagu ogeyn” ayuu yiri Xildhibaan Taw.
Xildhibaan Fowsiyo Yuusuf Xaaji ayaa soo hadal-qaadday sida ay dowladdu u kala xirtay magaalada, taas oo ay sheegtay iney sababtay dhibaato dhaqaale, bulsho iyo mid amaanba. “Magaaladii waxa ay u qaybsan tahay ilaa 4 qayb oo aan isku gudbi karin” ayey tiri Xildhibaan Fowsiyo. “Gaarigaaga markuu istaago waxaa kugu soo qamaamaya askar kuleh lacag noo tuur” ayey hadalkeeda raacisay.
Xildhibaan Seynab Caamir ayaa dhaliishay safarada tirada badan ee ay hogaanka dalku ugu ambo-baxaan dibadda, “iyagoo gabay” bey tiri “waajibaadkii ka saarnaa sugista amaanka shacabka”. Waxay dhibaatada amni si kulul ugu dhaliishay xukuumadda. “Labis qurxan, jaakad la xirto iyo diyaarad la raaco amni laguma sugi karo” ayey tiri Xildhibaan Seynab.
Xildhibaannaddu waxay sidoo kale aad u dhaliishay Golaha Shacabka, gaar ahaan Guddiga Amniga ee Golaha, oo ay sheegtay in haddii uu shaqadiisa qabsan lahaa ay xaaladdu sida ay tahay ka roonaan lahayd, sida ay hadalka u dhigtay. “Haddaan nahay Guddiga Amniga, anagaa dayacnay shaqadeenii” ayey tiri Xildhibaannaddu.
Laakiin, Xildhibaan Maxamed Cusmaan Boorow ayaa u sheegay golaha in aysan dowladdu haysan tirada ciidanka ay u sheegto Golaha Shacabka in ay haysato ee sanad kasta la meel-mariyo gunnooyinkooda. “Ciidanka Xooga maahan tirada lagu sheegay ee mushaarka iyo gunnadda lagu rabo” ayuu Boorow ku yiri Golaha Shacabka.
Xildhibaan Boorow waxa uu is weydiiyey sababta ay Muqdisho, oo ay joogaan ciidanka ugu badan ee Dowladda, u noqon la’dahay amaan. “Maamul Gobaleedyada qaar waa nabad, ciidanka AMISOM majoogaan, laakiin maxaa amniga u diiday magaaladda Muqdisho oo ah meesha ugu ciidanka badan” ayuu yiri Xildhibaan Boorow.
Xildhibaanno ka hadlay sida ay u arkaan dilka dhalinyarada bajaajta kaxaysa ee Muqdisho
Xildhibaan Khadiija Diiriye: Baarlamaanku waa maroodi aan xooggiisa u jeedin